Dil-Dilaaca Fadeexadaha TV Qaranka Kuwii Hore Ka Waa Weyn:
Maxaad Ka Ogtahay Irmaanta Uu Unoqday Dad Isku Beel ah Oo Lacag lagu siiyo Magaca TVQ
Ilaa iyo markii madaxweyne Siilaanyo xilka u magacaabay Khadar Cali Gaas in uu noqdo maareeyaha TV –ga Qaranka ee Somaliland, waxa uu Khadar umada u soo jeedinayey hadalo uu ku sheegayo in uu TV qaranka uu qaranka u badbaadiyey lacago badan oo lagu lunsan jiray intii ka horeysay magacaabistiisa. Waxa uu Khadar inoo sheegay in lacag ka badan konton kun oo Dollar uu dib ugu celiyey maaliyada Somaliland. Lacagta uu yidhi waan celiyey, waxa sida xilo ku dhadhow xaqiijiyeen ay ahayd mid lagu amray in uu miisaniyada TV –ga ka soo celiyo lacago loo qorsheeyey in la siiyo dad u suntan madaxtooyada Somaliland oo iyagu xiligii ololaha abaal maaliyadeed iyo mid kale u galay hogaanka madaxtooyda ee wasiir Xirsi iyo madaxweyne Siilaanyo.
Haddaba si loogu abaal gudo inta ugashay aabaalka oo loo xulay qaab xigaal-leed ama qaraabo kiil ah ayaa waxa uu wasiir Xirsi bilaabay Ilaa iyo badhtamihii bishii 11aad ee sanadkii 2012ka inuu u magacaaabo agaasimaha TV-ga Qaranka Somaliland laantiisa Yurub, Cabdiraxmaan Maxamed Adan –Dhari. Magacaabistan oo ahayd mid aan lagala tashan, waxba laga weydiin, isla markaana aan lala socodsiin markii horeba Khadar Cali Gas ayaa ujeedada laga laga lahaa ay ahayd in Ina Aadan Dhari fuliyo qorshe uu la dhacay Xirsi oo ah in loo soo mariyo lacago dadka xil-sugeyaasha (waa shaqo cusub oo xukumada Siilaanyo bilowday oo mushaar lagu qaato) Dadkaas oo si hayb ahaan ah loogu talo galay in lacag lagu siiyo, iyagoo qoran shaqaale TV Qaranka ah, balse badidoodu aanay haba yaraatee wax shaqo oo ya u qabtaan TV-ga Qaranka aanay jirin, marka laga reebo xubno iyaga la yidhi is-daad-raaciya shaqaalaha rasmiga ah ee TV ee la og yahay. Kuwan la yidhi si ay lacago u helaa meel ama Istuudyow TV-ga Qaranku ku magacaabnaada waxa ugu dabeeyey 4 qof oo bishii 9aad ee sanadkan lagu dhawaaqay in ay Cardiff ka yihiin shaqaale TV Qaranka ah si ay u helaan lacago si sharcidaro ah mushaar loogu qorayo.
Haddaba ilo ku dhadhow kooxahan iyo shaqsiyaadkan lacagta looga soo diro Somaliland iyadoo laga dhigayo kuwo TV Qaranka u shaqeeya waxa lagu qiyaasay in kabadan 45 qof oo kala jooga UK, min magaalada Sheffield, Birmingham, London iyo kuwo kale. Qofka ugu lacag badan ayaa la sheegay in uu qaato 1500 oo Dollar lacag u dhiganta, balse lagu siiyo lacagta UK. Dadkan oo iskugu jira xil-abaal celin-sugayaal iyo kuwo lacago ay lee yihiin iyo hanti ka gashay Xukumada Siilaanyo iyo kuwo si toos ah qaab eex ah loo bixiyo. Lacagtan sida tooska ah loogu soo shubo ayaa la soo mariyaa ninka ku magacaaban agaasimaha TV Qaranka ee Yurub, C/raxman Aadan Dhari- waxayna gaadhaa bishii ilaa 20 kun oo Dollar ama in ku dhow sodon kon oo Dollar, iyadoo ka soo baxda madaxtooyada SL, siiba dakhli khaas ah oo arimahan lacago loogu talo galay laga bixiyo, kaas oo aanay ogayn cidkale, balse lagu qoro lacagtaa TV Qaranka.
Arinkan ayaa argagax galiyey dadka ka war helay oo ee ay u sheegeen shaqsiyaadka la siiyo lacagtan, waxayna dadka reer UK is weydiinayaan maxaa tan xigidoona. Hase ahaatee xubin iisheegay in uu mar lacag la siiiyey xiligii uu Siilaanyo yimid London ee ugu dambaysey ayaa ku tiraabay hadal aan ka xusuusto “……Walaalow tani wey noo irmaanaatay cidii hadlaysaa ha iska ha hadashee…” Ogow uma irmaana dhalinyadarada Somaliland ee camal la’aan iyo lacag la’aani ku hayso gudaha Somaliland halka lagacow loo soo diro dad jooga Yurub!
Dhanka kale shaqsiyaadkan la siiyo lacagta waxa ay qaarkood lee yihiin xarumo website ah oo ay ku qoraan wararka iyo qoraalada sida heelanka ah u difaaca wasiir Xirsi iyo madaxweyne Siilaanyo. Intaa waxda u soo dheer iyadoo lagu amaray maareeyaha TV-ga Qaranka Khadar Cali Gaas in uu siiyo password-ka server-ka ay ku soo shubaan wararka wariyaasha TV-ga Qaranka ee Gobolada Somaliland, si ay halkaasi ugla degaan wararka si too ah oo ay u soo galiyaan website-kooda. Arinkan ayaa dareemaysaa iyadoo aad websites-kaa aad ka daawan karto wararkii TV-ga oo aan wali isagaba laga soo dayn ama hawada laga baahin.
Ogsoonow in TV-qaranka ku qoran tahay miisaaniyad ka badan ta labada gole ee Guurtida iyo Wakiilada iyo waliba saddex wasaaradoo oo kale oo la isku dayaray, hase ahaatee miisaaniyadu ma ah mid wada gasha TV-ga waase mid laga jaro lacagaha sharcidarada ah ee lagu bixiyo sifaha aynu kor ku soo shgeenay.
La soco magacayada la siiyo lacagtan ‘Irmaanta ah’ iyo inta la kala qaato, sida looqaato iwm oo aanu soo qorayno dhawaan.